चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका ‘गेम-चेन्जर’ परियोजनाहरु सुस्तायो, किन भैरहेछ ढिलाई? :: BIZMANDU
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका ‘गेम-चेन्जर’ परियोजनाहरु सुस्तायो, किन भैरहेछ ढिलाई?
प्रकाशित मिति: Apr 16, 2018 1:00 PM
ग्वादर पाकिस्तान। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)को काम सातवटा देशमा निकै सुस्ताएको छ। जापानी अखबार निक्की एशियन रिभ्यूले सातै देशमा गरेको एक अध्ययनपछिको प्रतिबेदनले यस्तो देखाएको हो।
बिआरआईको उद्देश्य एशियालाई यूरोप तथा अफ्रिकालाई एशियासँग जोडेर ब्यापारका लागि मजबुत ढाँचा तयार पार्नु हो। तर हाल यसको कामको गति मन्द भएको छ।
पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा ग्वादर पोर्ट ६३ अर्ब डलर लगानीमा चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर अन्तर्गत काम हुँदैछ। यस परियोजना अन्तर्गत चीन पाकिस्तानका लागि पावर प्लान्ट, एयरपोर्ट हाइवे तथा अन्य पूर्वाधारहरु तयार गरिरहेको छ।
तर केही विश्लेषकहरुले चीनसँग ब्यापार घाटा बढिरहेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन्। विश्लेषकहरुले भनेका छन् कि पाकिस्तानले चीनको ऋण कसरी चुक्ता गर्ला? यस्ता परियोजनाहरुमा भैरहेको निकै लगानी पाकिस्तानमाथिको ठूलो ऋणभार पनि हो भन्दै उनीहरु चिन्तित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा पाकिस्तान बिजनेस काउन्सिलका सिइओ एहसान मलिकको भनाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ-‘यसमा कुनै सन्देह छैन कि चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर पाकिस्तानका लागि ‘गेम चेन्जर’ सावित हुन्छ तर हामी सावधान रहन जरुरी छ। दश वर्षको ट्याक्स छुटको बदलामा चिनियाँ कम्पनीहरुकालागि ९० बर्षको लिज रतथा सस्तो आयातले घरेलु उद्योगहरुको प्रतिश्पर्धामा असर गर्नेछ।’
निक्की, एशियन रिभ्यू तथा द बैंकर म्यागेजिनले सात देशहरुमा बीआरआईको स्ट्याटसका बारेमा अध्ययनपछि प्रतिबेदन प्रकाशित गरेका हुन्। उनीहरुले इन्डोनेशिया, श्रीलंका, काजकिस्तान, बंगलादेश, पोल्याण्ड, लाओस तथा पाकिस्तानमा यस्तो अध्ययन गरेका थिए।
यी देशहरुमा स्थानीय कामदारहरु तथा बैंकहरुको अब्यबस्थित ऋणहरुका कारणले परियोजनाहरुमा सहभागिता न्यून भैरहेको दावी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
इन्डोनेशियामा बिआरआई परियोजनमा निकै ढिलाइ भैरहेको छ। ६ अर्ब अमेरिकी डलरको रेलवे परियोजना तोकिएको म्यादभन्दा निकै पछि परेकाले परियोजनाको लागत बढिरहेको बताइएको छ। यस्तै समस्या काजकिस्तान तथा बंगलादेशमा पनि देखिएको छ।
घाटालाई लिएर श्रीलंका, मालदिप्स तथा लाओसले पनि पाकिस्तानको उदाहरणलाई लिएर चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार बेइजिङको यो अत्यन्तै ठूलो आर्थिक परियोजना भएकाले ति देशहरुको सम्प्रभूता तथा स्वाभिमानका बिषयमा पनि चिन्ता बढ्न थालेको छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा पोर्टमा चीनले गरेको ‘टेकओभर’लाई यी देशहरुले सम्प्रभूतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्।
चीनले इन्डोनेशियाको बानडुंग शहरबाट राजधानी जकार्तासम्म १४२ किलोमीटर लामो रेलवे लाइनको निर्माण गरिरहेको छ। यो मार्ग आगामी वर्ष पूरा हुने भनिएको छ। तर यो परियोजना तोकिएको म्यादमा पूरा हुने संकेत देखिँदैन। इन्डोनेशियाको सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार गत फेब्रुअरीसम्म यो परियोजनाको काम १० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।
बंगलादेशमा सीएसआईएस, रिकनेक्टिङ एशिया प्रोजेक्ट, बिआरआईको तीन प्रमुख परियोजनाहरु ढाका जेसोर रेल लाइन, पेरा पावर प्लान्ट तथा कर्नाफुली टनेल निर्माणाधिन छ। कर्नाफुली टनेल बंगलादेशको पहिलो अन्डर वाटर टनेल हुनेछ। पेरामा १.६५ अर्ब डलरको पावर प्लान्टको काम सुरु भैसकेको छ।
यो परियोजना चिनियाँ पावर कम्पनी सिएमसी तथा बंगलादेशको नर्थ वेस्ट पावर जेनरेशन कर्पोरेशनको ज्वाइन्ट भेन्चर हो। बेइजिङले यो परियोजनाको फाइनान्सिङ गरेको छ। यो परियोजना आगामी डिसेम्बरमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
४.४ अर्ब डलरको ढाका जेसोर रेलवे लाइन परियोजना पनि सुरुवाती चरणमा छ। यसको काम सन् २०२२ सम्म सुरु हुने संभावना रहेको बताइएको छ। यसैगरी ७०५ मिलियन डलरको कर्नाफुली टनेल परियोजनाकालागि चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा बंगलादेश ब्रिज अथोरिटी बिबिएले सन् २०१५ मै सम्झौता गरिसकेको भएपनि काम सुरु हुन सकेको छैन।
तर बंगलादेशको अखबार ‘द फाइनान्सियल एक्सप्रेस’ले गरेको दावी अनुसार बिबिएलाई एग्जिम बैंक अफ चाइनाका तर्फबाट फन्डिङ नभएपछि अहिलेसम्म काम सुरु हुन नसकेको हो।
यस्तै लाओसमा ४१४ किलोमीटर रेलवे लाइनले लाओसको राजधानी भियन्टियनलाई चीन लाओस सीमासम्म जोड्ने परियोजना हो। यो परियोजना आगामी सन् २०२२ सम्ममा पूरा हुनुपर्ने डेडलाइन छ। लाओसमा यो रेलवे परियोजनाको चर्चा निकै अघि नै सुरु भएको थियो।
सन् २०१६ मा मात्रै परियोजना सुरु भयो। तर परियोजनामा संलग्न स्थानीय कामदार तथा कर्मचारीहरुमाथि चिनियाँ कर्मचारीको प्रभुत्व कायम भएको गुनासाहरु सुरु भएका छन्। यस्तै परियोजनाको लागत निकै बढेको भन्दै स्थानीय बैंकहरुले पनि चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।
गत आइतबार भएको स्ट्रयाटेजिक इकोनोमिक डाइलगमा चीनले बिआरआईको बिषयलाई उठाएको छ। यसमा भारतले सिपिइसीका बिषयमा आफ्नो चिन्ता ब्यक्त गरेको छ।
पाकिस्तान शासित काश्मिर भएर जाने यो परियोजनाका बिषयमा भारतले पहिलेदेखि नै असहमति जाहेर गर्दै आएको छ। चिनियाँ पक्षसँगको वार्ताका क्रममा भारतको नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीब कुमारले भारतले आफ्नो सम्प्रभूताका बिषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको बताए।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका ‘गेम-चेन्जर’ परियोजनाहरु सुस्तायो, किन भैरहेछ ढिलाई? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
गाडी एसेम्बल्डको स्वीकृति पाएको मोट्रेक्सको कडा शर्त, सात वर्ष अर्को कम्पनी आउन नपाउने